XOG: RW kheyre iyo R/wasaaraha itoobiya oo ku heshiiyay qodob Halis ku ah Madaxda M/gobaleedyada | Allbanaadir News
XOG: RW kheyre iyo R/wasaaraha itoobiya oo ku heshiiyay qodob Halis ku ah Madaxda M/gobaleedyada
Warar hoose ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre uu Ra’iisul wasaaraha Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed u sheegay in Dowlada Soomaaliya ay Itoobiya ka rajeyneyso inaysan fara galin ku sameyn siyaasada Soomaaliya, isla markaana ay joojiso kulamada aan dowlada ogeyn oo Madaxda Maamul Gobaleedyada ay la yeelanayaan.
Wasiirka Qorshaynta Xukuumadda Soomaaliya, Wasiiru Dawlaha Arrimaha Dibadda, safiirka Soomaaliya ee dalka Ethiopia iyo xubno ka socda Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa goobjoog ka ahaa kulankan xasaasiga ah, iyadoo natiijo wax ku ool ay kasoo baxday isla markaana Labada Dowladood ay ku heshiiyeen in danta Geeska Afrika laga wada shaqeeyo.
Dr. Abiy Ahmed Ra’iisul wasaaraha dowladda Ethiopia ayaa u balanqaaday dhigiisa in Xukuumadiisa ay si gaara ula shaqeyn doonto Madaxda Soomaaliya uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo uu ku amaanay inuu isbedelo badan kusoo kordhiyay dalka Soomaaliya aay hore u socoto.
Mudane Kheyre ayaa soo dhaweeyay Aqbalaada qorshaha ay Itoobiya u bandhigeen isagoona kaga mahad celiyay taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya.
Dowlada Itoobiya ayaa Madaxda dalka u balanqaada inaysan faragalin ku sameyneyn siyaasada Soomaaliya hadana waxay u yeerataa madaxda Dowlad Gobaleedyada oo dano gaara kala dhaxeeyo, waxaana dhowr jeer hore u fashilmay balanqaadyo ku aadanaa inay dowlada Soomaaliya kaga dambeyneyso siyaasadda dalka.